सिद्धान्त हिन एमाले–माओवादी झुटको पार्टीः रामचन्द्र पौडेल::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
सिद्धान्त हिन एमाले–माओवादी झुटको पार्टीः रामचन्द्र पौडेल
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : आइतवार, जेष्ठ १३, २०७५
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमाले र माओवादी केन्द्रले स्वार्थका लागि आफ्नो सिद्धान्तलाई छाडेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियनको २७औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा काठमाडौंमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले दुबै कम्युनिस्ट पार्टीले स्वार्थका लागि सबै सिद्धान्तहरू छाडेको बताए ।
‘उनीहरू कम्युनिस्ट नै होइनन् । कम्यनिस्टका नाममा जनतालाई गुमराहमा राख्नेहरू हुन् । झुटको खेती गर्छन्’, नेता पौडेलले भने, ‘एमाले र माओवादीले केका लागि आन्दोलन गरेका थिए ? के उदेश्य राखेका थिए ? सबै छाडिसकेका छन् । उनीहरूले जनतालाई धोका दिएका छन् ।’
वरिष्ठ नेता पौडेलले भने, ‘एमाले र माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई झुक्काउन कुन दिन कम्यनिस्ट शब्द पनि हटाउँछन् हेर्दै जानु होला । यो धेरै दिन पर्खनु पर्दैन । उनीहरूले दुनियाँलाई झुक्काउँदै आएका छन् ।’